China High efficencyency Off -gas Heat Exchanger namboarin'ny orinasa Pillow Plates sy mpanamboatra | Chemequip
Fahombiazana avo lenta -gas hafanana mpanamboatra hafanana vita amin'ny takelaka ondana
Ny fitaovana Off-gas （flue） hafanana dia mampiasa ny takelaka famindrana hafanana novokarinay ho toy ny singa fifanakalozana hafanana lehibe. Ny takelaka famindrana hafanana dia voalamina amin'ny elanelam-potoana iray; ny mpanelanelana amin'ny hafanana dia mihazakazaka ao anatin'ny lovia, ary ny fantson-tsolika (gazy tsy misy gazy na flue) dia ivelan'ny lovia. Ny elanelana misy eo amin'ny takelaka famindrana hafanana dia azo ahodina tsara sy ahitsy arakaraka ny toe-javatra iasana.
Inona ny mpanondrana hafanana (gazy flue)?
Ny entona ivelan'ny entona (gazy flue) dia ampiasain'ny hafanana entona (mialoha ny fanafanana), fampangatsiahana (pre-cool), fanarenana hafanana ary ireo fepetra maro samihafa. Miorina amin'ny teknolojia mitarika an'izao tontolo izao amin'ny famolavolana lovia fametahana takelaka ondana, miaraka amin'ny tombony ara-teknika lehibe, ao anatin'izany: fahamendrehana avo lenta, fantsom-pifandraisana, habe kely, fahombiazana avo lenta ary mora diovina.
Ny exchanger hafanana ivelan'ny -gas (gazy flue) dia mampiasa lovia ondana, izay voalamina arakaraka ny halaviran'ny sasany. Ao anaty lovia misy fantsom-panafody, ivelan'ny takelaka misy fantsona gazy (gazy flue). Ny elanelana misy eo anelanelan'ny takelaka dia azo ahitsy amin'ny alàlan'ny fepetra miasa. Ny takelaka ondana miaraka amin'ny famolavolana fantsona malalaka dia tsy vitan'ny hoe mahatonga ny coefficient fifanakalozana hafanana avo lenta, fa manana tombony ara-teknika ambonimbony kokoa noho ireo mpivarotra hafanana nentim-paharazana, ao anatin'izany ny fihenan'ny tsindry ambany, ny hafanana avo ary ny fanoherana ny tsindry avo ary ny fanadiovana mora foana.
Ny takelaka famindrana hafanana dia miaraka amina famolavolana fantsona malalaka. Ankoatry ny fananana coefficient famindrana hafanana avo dia avo dia manana toetra ara-teknika izay tsara lavitra noho ireo mpivarotra hafanana nentim-paharazana, toy ny fidinan'ny tsindry ambany, ny hafanana avo ary ny fanoherana ny tsindry, ny fanoherana ny vovoka ary ny fanadiovana mora foana.
Inona no ilana mpanondrana hafanana tsy misy gazy (gazy flue)?
(1) Ny exchanger hafanana (gazy flue) dia azo ampiasaina amin'ny sehatry ny simika
(2) Ny exchanger hafanana (gazy flue) dia azo ampiasaina amin'ny tanimboly
(3) Ny exchanger hafanana (gazy flue) dia azo ampiasaina amin'ny fandoroana fako
(4) Ny exchanger hafanana (gazy flue) dia azo ampiasaina amin'ny indostrian'ny fanontana sy fandokoana
(5) Ny exchanger hafanana (gazy flue) dia azo ampiasaina amin'ny indostrian'ny lamba
Ny tombony azontsika amin'ny famoahana hafanana (gazy flue)?
(1) SS304, SS316, 2205 ary Hastelloy dia azo ovaina voafantina ho an'ny fitaovana takelaka fifanakalozana hafanana.
(2) Ny takelaka dia mahazaka ny tsindry anatiny ao anaty 60bar avo indrindra, ary afaka mihazakazaka ny rano, ranomandry, menaka mafana, etona, vata fampangatsiahana
(3) Ny takelaka dia mahazaka ny tsindry ivelany an'ny 300bar avo indrindra
(4) Miaraka amin'ilay faritra misy ny fifanakalozana hafanana dia ny antsasaky ny volabe ihany no ampiasainy raha ampitahaina amin'ny mpampita hafanana fantsona
(5) Ny famolavolana fantsom-pifandraisana Parallel, saika tsy misy fanoherana ny rivotra, tsy mila mpankafy fanampiny
(6) Ny takelaka famindrana hafanana dia mahatratra ny fikorontanana avo amin'ny rano mangatsiaka na etona, manampy amin'ny famoronana fahombiazan'ny fifanakalozana hafanana
(7) Ny firafitra manokana amin'ny takelaka fifanakalozana hafanana dia manamora kokoa ny fandidiana, ny fidiovana ary ny fikojakojana raha oharina amin'ny fantsom-pamokarana hafanana sy ny fika entin'ny mpanondrana hafanana
(8) Ny endrika maodely, mora ampidirina ao amin'ny rafitra fitsaboana entona mandrehitra ny tetikasa vaovao na tetikasa fanavaozana
Ny toerana fametrahana tetikasa ho an'ny mpamatsy hafanana Off-gas (flue gas)
Fampisehoana video exchanger hafanana tsy misy gazy (gazy flue)
Previous: Masinina ranomandry mamonjy angovo sy mahomby
Manaraka: Rafitra fitehirizana ranomandry ao amin'ny Banky Ice
Exchanger hafanana (gazy flue) simika
Mpamadika hafanana fako
Exchanger hafanana entona
Exchanger hafanana gazy orinasa
Famolavolana hafanana hafanana entona
Exchanger hafanana boiler
Mpanakalo hafanana lafaoro
Mpamatsy hafanana entona
Exchanger hafanana turbine
Entona ivelan'ny indostria, gazy flue） mangatsiatsiaka kokoa
Exchanger hafanana karazana lovia indostrialy
exchanger hafanana ivelan'ny entona entona
exchanger hafanana indostrialy
Exchanger hafanana (gazy flue) ho an'ny lafaoro
Masinina fotsy (gazy flue) mangatsiaka kokoa
Exchanger hafanana (gazy flue)
Gas-etona (etona flue） evaporator takelaka mpanondrana hafanana
Gas-gazy （gazy flue ex mpanova hafanana
Stainless vy Dimple palitao , Masinina ranomandry ranoka, Exchanger hafanana takelaka, Masinina ranomandry slurry indostrialy, Masinina ranomandry slurry ara-barotra, Exchanger hafanana anaty rano ho an'ny reaktor,